Taalibaan oo ka hadashay Ciidamada Mareykanka ee ka baxay Afgaanistaan
HomeWararka CaalamkaTaalibaan oo ka hadashay Ciidamada Mareykanka ee ka baxay Afgaanistaan
August 31, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Kooxda Taalibaan ayaa dabbaaldegyo ka bilowday magaalada caasimadda ee Kabul iyaga oo rasaas cirka u ridaya, kaddib markii ay la wareegeen gacan ku heynta garoonka diyaaradaha Hamid Karzai, kaas oo ay ka baxeen ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanka.
Ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Kabul ayaa soo afjartay 20 sano oo dagaal ah, kaas oo Taalibaan ka dhigay mid ka awood badan sidii ay ahaayeen sanadkii 2001.
Muuqaallo ay siideysay Taalibaan ayaa muujinayay ciidankeeda oo galaya garoonka diyaarayaha kaddib markii diyaaraddii ugu dambeeyay ee siday ciidamada Mareykanka ay ka duushay daqiiqad kahor saqda dhexe ee xilliga Kabul, taas oo calaamad u aheyd dhammaadkii bixitaankii degdegta ahaa Washington iyo xulafadeeda NATO.
“Dhammaan xoogaggi shisheeyaha ahaa ee dalka qabsaday waxay daqiiqado kahor ka baxeen dalka” ayuu VOA u sheeegayi sarkaal sare oo ka tirsan Taalibaan.
“Askarigii ugu dambeeyay ee Mareykan ah ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Kabul, dalkeennu wuxuu qaatay xornimo buuxda,” ayuu yiri afhayeenka Taliban Qari Yuusuf, sida laga soo xigtay TV-ga Al Jazeera.
Dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka oo socday 20 sano wuxuu galaaftay nolosha ku dhawaad 2,500 oo askar Mareykan ah iyo qiyaastii 240,000 oo reer Afgaanistaan ah, waxaana ku baxay ilaa $ 2 tirilyan oo dollar.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in qiyaastii in ka yar 200 oo qof oo Mareykanka ah ay u suuragali weysay inay raacaan duulimaadyadii ugu dambeeyay ee ka soo baxa Kabul.
Taliyaan loo Magacaabay Degmooyin ka tirsan Galgaduud iyo kuwa Xilalka laga qaaday